Att föda barn i Jönköping - somaliska - 1177
Att föda barn i Jönköping - somaliska
Canug ku dhalid Jönköping
Att föda barn i Jönköping - somaliskaThe content concerns Jönköpings län
Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Jönköping, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.
Sidee baa la suubin? - Hur går det till?
Saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka ku yaal si dhow bey u wada shaqeeyan sidey si kalsooni iyo wanaagsan u gacan qabtan dadka hooyooyinka noqon iyo carruurta. Adiga waxaa ku dhali markasto isbitaalka laguu qorsheeyay, laakin haddii uu buuxo, waxaa suurtagal ah in aad ku dhashid labada isbitaal oo kale oo gobalka ku yaal midkood – Isbitaalka[Höglandssjukhuset] Eksjö ama isbitaalka[sjukhus] Värnamo.
Inta aadan soo aadin isbitaalka, soo wac markasto koow qeybta foosha sidaa ula tashatid ummuliso, oo la socoto waxa ku qoran buugga caafimadka oo daryeelka dumarka iyo idiin sii diyaarin qaabilad wanaagsan. Ilbaabka laga soo galo qeybta foosha waxaa ku yaal afar boos uu baabuurka la dhigto uu baabuurkaada kuu yaali kara ugu badnaan afar saac. Markas kadib waa qasab inaa baabuurka geysid qeybta isbitaalka oo dadka booqashada baabuurta dhigtan oo kharashka la bixiyo.
Marka aad imaatid
Marka aad imaatid qeybta foosha waxaa la qiimeyn baahida aad u qabtid daryeel oo waxaa la kulmi ummuliso iyo haddii loo baahdo dhakhtar. Kaarka aqoonsiga horey usoo qaado. Haddii xita qiimeynta ey wakhti qaadankarto, aamaanka oo inaa heshid daryeel wanaagsan markastoa ad buu muhiim u yahay.
Haddii adiga laguu qiimeeyo inaa ku jirtid marxalada qarsoon waa inaa diyaar u ahaata inaa guriga dib ugu noqotid iyo sugatid inta foosha rasmiga ka bilaabaneyso. Adiga waa isku diyaarinkarta foosha oo waxaa sii akhrisankarta warbixinta ku saabsan foosha marxaladaheeda kala duwan, xanuun jabinta iyo wax kale, meeshan oo 1177.
Shaqaalaha oo qeyba foosha weey ku da’daalaayan iney kula joogan qolka foosha inta ugu badan oo foosha rasmiga socoto.
Kaalmada ehelka waa muhiim inta aad foolaneysid. Qofka foolan waa la siin cunto iyo cabitan. Qofka kula nool ama ehelka waa iney horey usoo qaatan ama ka iibsadan cunto tusaale ahaan biibitada Ryhovs ama maqaajada. Horey usoo qaadatid cunto iyo cabitan. Tallaagad iyo mashiinka cuntada kululeeyo waa ka hele meesha.
Xanuun jabin - Smärtlindring
Anaga waa kugu martiqaadi farsamo xanuun jabin oo daawo eheen iyo farsamo xanuun jabin oo daawo ahaan. Nooca xanuun jabinta waxaa dooran adigo la tashtay ummulisada. Farsamada xanuun jabinta aan kugu martiqaadi waxaa kamid ah:
Caawinaad neefsashada qaaska[profylaxandning]
Cirbadaha jirka lagu mudo
Biyo nadiif maqaarka hoostiisa lagu shubi[Sterila kvaddlar]
Suuxinta dabarka (KEDA iyo foosha dabar suuxinta)
Suuxinta lafta misigta (PDB)
Daawooyinka xanuun jabinta
Adiga waxaa xita deynsankarta mashiinka TENS oo ka heleysid qeybta caafimaadka dumark[kvinnohälsovården].
Laakin anaga ma kugu martiqaadeyno farsamada suuxinta oo la dhaho paracervikalbedövning (PCB/Västerviksmetoden).
Dabar suuxinta waxaa suubin dhakhtarka suuxinta. Haddii aad dooneysid dabar suuxinta xaaladaha inta ugu badan adiga waa helikarta, laakin waxaa dhicikarto inaa wakhti sugtid oo waxey ku jirantahay sida u mashquulsanyahay dhakhtarka suuxinta.
Daryeelida foosha kadib - Vård efter förlossningen
Ilaa inta aad joogeysid BB waxey ku xirantahay adiga baahida aad u qabtid daryeel, laakin fooshaada haddii ey eheed mid caadi adiga waxaa gurigaada aadi inta u dhaxeyso 6 ilaa 48 saac foosha kadib. Laakin waxaa shuruud ah in hooyada iyo canuga caafimaad qaban. Dhammaan caruurta waxaa baari dhakhtar inta eysan aadin gurigooda. Dadka qaarkood toos bey gurigooda uga aadaayan qeybta foosha, dadka qaarkood dhowr saacadood bey joogaayan BB inteysan gurigooda aadin. Foosha kadib adiga waxaa xiriir la lahaan BB ilaa canugaaga ka noqon todobo maalmood. Markas kadib adiga waxaa xiriir la lahaan ruugta caafimaadka carruurta.
BB oo guriga iyo qeybta BB oo isbitaalka - BB-hemma och BB-mottagningen
Si aad ugu kalsoonaan kartid inaa guriga aadid adigoo waalidnimada kugu cusubtahay, adiga waxaa xiriir la lahaan BB oo isticmaali BB oo guriga iyo ugu imaan kulan koontaroolid qeybta BB oo isbitaalka ilaa canuga ka noqon todobo maalmood. BB oo guriga iyo qeybta BB oo isbitaalka waxaa loogu talagalay qoysaska gurigooda aado 24 saac koowad gudaheeda. Adiga waxaa lagugu martiqaadi inaa ummuliso telefoonka kala soo xiriirikartid iyo booqasho dib ugu imaaneysid qeybta BB oo isbitaalka. Ummulisada waxey ka jawaabi su’aalahaada iyo ku siin talooyinka aad u baahantahay.
Qeybta BB oo isbitaalka waxaa kaliya qaabilnaa hooyoyinka, carruurta hada dhashay iyo qofka nolosha wadaagtiin.
Qeybta BB waxey leedahay qol oo labo sariir iyo qol afar sariir. Qolka iyo booska sariirta aad helidoontid waxey ku xirantahay daryeelka aad u baahantahay foosha kadib iyo tirada oo inta qof oo lagu daryeelooyo BB.
Haddii boos jiro buu qofka nolosha kula wadaago habenka kula seexankara. Ujeedka baa ah in qofkas ka qeyb mid noqdo daryeelida canuga. Haddii eysan suurtagaleyn qofkas wuxuu ka qeyb-qaadankara daryeelida canuga xilliga maalmaha.
Kharasha qofkas iyo hooyada bixin oo booska daryeelka waa 100 karoon 24 saacba iyo waxaa dib la idinkaga soo diri warqada lacag bixinta. Qofka kula nool kharashka iska bixin waa sariirta iyo quracda.
Haddii qofka kula nool doonaayo inuu qeybta wax ku cuno waa suurtagal. Laakin anaga markas lacagta kaar kaliya baa ku qaadan.
Soo booqashada BB
Booqasho xilliga aad dooneysiin waxey suurtagal u tahay kaliya adiga, qofka kula nool iyo canuga hada dhashay walaalahis, waa haddii idinka aadan hergabsaneen ama cudur faafi aadan qabin. Ku fikir iney halista infekshanada ey badantahay, canuga ha ka soo saarin qeybta!
Dadka oo dooni iney ku soo booqdan waa iney la sugtaan inta aad guriga dib ugu noqoneysiin.
Maadaama ey caadiyan yahiin allergiiyada isbitaalka oo dhan waa ka mabnuuc ubaxyada.
Ka cabsashada foosha - Förlossningsrädsla
Adiga oo cabsi badan ka qabo foosha waxaa caawinaad iyo kaalmo ka helikarta qeybta isbitaalka oo la dhaho Auroramottagningen. Waxey xita ahaankarta in adiga cabsi badan ka sii qabtid ka hore uurka, inta aad uurk leedahay iyo xilliga foosha, oo cabsidas darteed uur iskaga ilaalineysid ama inaa canug dhashid.
Qeybta Auroramottagningen waxaa ka shaqeeyo ummulisooyin oo khibrad dheer u leh foosha, dhakhtarka foosha iyo dhakhtarka cilmiga nafta. Adiga waxaa la soo xiriirikarta qeybta Auroramottagningen oo ummulisada qeybta daryeelka caafimaadka dumarka baa kuu soo gudbinkarto.